Microsoft PowerPoint: Slideshows and Presentations 16.0.11727.20104 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
စတိုးမွ ေဒါင္းလုပ္မ်ား 25k - 50k
ဗားရွင္း 16.0.11727.20104 လြန္ခဲ့ေသာ2လက
Application မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း Microsoft PowerPoint: Slideshows and Presentations
Microsoft PowerPoint: Slideshows and Presentations ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အဆိုပါ PowerPoint app ကိုသင်ပြီးသားသိကျွမ်းတဝင် tool ကိုမှ access ကိုပေးသည်။ လျင်မြန်စွာ, ပစ္စုပ္ပန်ပြင်ဆင်ရန်, အမြင်, ဖန်တီး, ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုကနေမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူတင်ပြချက်များမျှဝေပါ။ ယင်းကိုသွားပေါ်နေချိန်တွင်အလျင်အမြန်ဆုံးသင့်မကြာသေးမီကအသုံးပြုသော PowerPoint ဖိုင်များကိုဝင်ရောက်ဖို့လိုအပ်ပါသလား? PowerPoint မဆိုစက်ပေါ်မှာလွယ်ကူစွာအဘို့သင့်မကြာသေးမီဖိုင်တွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်အမြင်ပေးပါသည်။ သငျသညျ PowerPoint မိုဘိုင်းပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည့်အခါဖိုင်မျိုးစုံကိုဗားရှင်းအကြောင်းကိုစိုးရိမ်နေပါသလား ထပ်တူပြုခြင်းမပြုလုပ် devices တွေကိုဖြတ်ပြီးချောမွေ့စွာပါပဲ။ ယုံကြည်မှုနှင့်အတူ, ဘယ်နေရာမှာမဆို, မည်သူမဆိုနှင့်မည်သူမဆိုဖို့ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်။ PowerPoint နှင့်အတူ, သင့်ရုံးသငျနှငျ့အတူလှုံ့ဆော်ပေး။
PowerPoint သင်ထွက်မတ်တပ်ရပ်စေအစွမ်းထက်နှင့်စိတ်ကြိုက်တင်ပြချက်များနှင့်အတူတစ်တည်မြဲစှဲလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဖန်တီး. ဘယ်နေရာကနေမဆို, ယုံကြည်မှုနှင့်အတူတင်ပြ။ တစ်ကြည်နူးဖွယ်နှင့် Impact တင်ဆက်မှုပြုလုပ်ခြင်းပိုမိုလွယ်ကူခဲ့ဘယ်တော့မှသိရသည်။ PowerPoint သင်သည်သင်၏တင်ဆက်မှုတည်းဖြတ်အစစ်အမှန်အချိန်အတွက်အခြားသူများနှင့်ပူးပေါင်း, သွားလာရင်းပေါ်မှာစိတ်ကြိုက်နိုင်စွမ်းကိုပေးသည်။
သွားလာရင်း PowerPoint နဲ့စည်းချက်လက်လွတ်ဘယ်တော့မှမ။ သငျသညျသစ်ကိုတင်ဆက်စေခြင်းသို့မဟုတ်ရှိပြီးသားသူတွေကိုအလုပ်လုပ်ဆက်လက်နိုင်ပါတယ်။ PowerPoint OneDrive ရန်သင့်တင်ပြချက်များထပ်တူပြုပြီးကတည်းကသို့ဖြစ်လျှင်သင်သည် PowerPoint မိုဘိုင်းသုံးပြီးတည်းဖြတ်ပစ္စုပ္ပန်, သင့်ရဲ့ PC ပေါ်မှာတင်ဆက်မှုစတင်နိုင်ပါသည်။ မည်သည့်စက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိတင်ဆက်မှုအမြင်နှင့်အတူအားလုံးသင့်ရဲ့ Laptop ကိုဖွင့်ပစ်ခတ်ခြင်းမရှိဘဲ, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်အတူသင်၏မှတ်ကိုတင်ပြ။
တစ်ဦးကလှလှပပထွင်းထုတင်ဆက်မှုအမြဲတမ်းအနိုင်ရသည်။ PowerPoint အတွက်အစွမ်းထက်နှင့်အလွန်အမင်းစိတ်ကြိုက်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူတစ်ဦးအထင်အမြင်စေနှငျ့သငျယခင်ကထက်ပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်ပါတယ်ထွက်မတ်တပ်ရပ်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟု presentation ဖန်တီးဖို့။
PowerPoint ကလွယ်ကူသင်သည်အခြားသူများနှင့်ပူးပေါင်းစေသည်။ အတူခွဲဝေမှု 1-click နှိပ်ပြီးအလျင်အမြန်, အမြင်တည်းဖြတ်, သို့မဟုတ်သင့်ဆလိုက်အပေါ်တုံ့ပြန်ချက်များကိုအခြားသူများအားဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ အလွယ်တကူခွင့်ပြုချက်စီမံခန့်ခွဲနှင့်သင့်တင်ဆက်မှုတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်မယ့်သူကိုကြည့်ပါ။ အဆိုပါဆလိုက်အတွင်းဘက်ပေါင်းစုံမှတ်ချက်များနှင့်အတူအခြားသူများထံမှအပြောင်းအလဲများနှင့်တုံ့ပြန်ချက်၏ထိပ်ပေါ်မှာနေပါ။ သင့်ရဲ့တင်ဆက်မှုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြောင်းလဲထားပြီးဘယ်လိုကြည့်ဖို့အပြောင်းအလဲများကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။
• OS ဗားရှင်း: running အန်းဒရွိုက်၏ထောက်ခံဗားရှင်းမဆိုနှင့် ARM-based သို့မဟုတ် Intel ရဲ့ x86 Processor ကိုရှိသည်။ KitKat သို့ & Lollipop device များအတွက်ပံ့ပိုးမှုဇွန်လ 2019 မကုန်မှီတိုင်အောင်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
အထက်• 1 GB RAM သို့မဟုတ်
စာရွက်စာတမ်းများဖန်တီးသို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ရန်စေရန်, 10.1 လက်မသို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့ screen ကိုအရွယ်အစားနှင့်အတူကိရိယာများပေါ်တွင်အခမဲ့ Windows Live Microsoft account ကို sign in ။
တစ်ဦးခြေစစ်ပွဲ Office 365 ကိုသင့်ရဲ့ဖုန်း subscription ကို (http://aka.ms/Office365subscriptions ကိုကြည့်ပါ), တက်ဘလက်, PC မှာ, နှင့် Mac နှင့်အတူအပြည့်အဝကို Microsoft Office ကိုအတှေ့အကွုံ Unlock ။
app ကိုထံမှဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်တဲ့ Office 365 subscriptions ကိုသင့် Play Store မှာအကောင့်တရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ပြီး Auto-သက်တမ်းတိုးကြိုတင်ပိတ်ထားသည်မဟုတ်လျှင်အလိုအလျှောက်, ကြိုတင်လက်ရှိစာရင်းသွင်းခြင်းကာလ၏အဆုံးမှ 24 နာရီအတွင်းပြည့်ကြလိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏ Play Store ကိုအကောင့်ဆက်တင်များ၌သင်တို့၏ subscriptions ကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါ။ တစ်ဦးက subscription ကိုတက်ကြွစွာကြေးပေးသွင်းကာလအတွင်းဖျက်သိမ်းရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ဒီ app တစ်ခုခုကိုမိုက်ကရိုဆော့ဖသို့မဟုတ် third-party app ကိုထုတ်ဝေသူကထောက်ပံ့ပေးမယ့်သီးခြား privacy ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာချက်နှင့်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒေတာကိုဒီစတိုးဆိုင်၏အသုံးပြုမှုကိုတဆင့်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းနှင့်ဒီ app သက်ဆိုင်သောအဖြစ် Microsoft ကဒါမှမဟုတ် Third-party app ကိုထုတ်ဝေသူမှလက်လှမ်းဖြစ်စေခြင်းငှါ, လွှဲပြောင်း, သိမ်းဆည်းထားများနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့မဟုတ်အခြားတိုင်းပြည်ရှိရာမိုက်ကရိုဆော့ဖသို့မဟုတ် app ကိုထုတ်ဝေသူအတွက်လုပ်ငန်းများ၌နှင့် သူတို့ရဲ့ affiliates သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုပေးအဆောက်အဦကိုထိန်းသိမ်းရန်။
Android ပေါ်မှာရုံးများအတွက်ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များများအတွက် Microsoft ရဲ့ EULA ကိုဖတ်ရှုပါ။ app ကိုတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်, သင်သည်ဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများကိုရန်သဘောတူ: http://aka.ms/eula
Microsoft PowerPoint: Slideshows and Presentations အတြက္ စတိုးအသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Microsoft PowerPoint: Slideshows and Presentations အေပၚ စတိုး ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Microsoft PowerPoint: Slideshows and Presentations အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
hazel777 စတိုး 75.77k 50.06M
Microsoft PowerPoint: Slideshows and Presentations ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
Flashlight LED Stroboscope + Timer
APK အေၾကာင္း Microsoft PowerPoint: Slideshows and Presentations အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 16.0.11727.20104
ထုတ်လုပ်သူ Microsoft Corporation
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=507380
App Name: Microsoft PowerPoint: Slideshows and Presentations
File Size: 121.88MB
Release date: 2019-06-25 05:19:26
လက်မှတ် SHA1: 7D:C8:3C:D2:AB:E8:33:56:0C:28:96:62:6E:30:70:41:C0:DF:3A:7A
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Microsoft Corporation Third Party Marketplace (Do Not Trust)
အဖွဲ့အစည်း (O): Microsoft Corporation
နယ်မြေ (L): Redmond
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Washington
Microsoft PowerPoint: Slideshows and Presentations APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ